Umthandazo wokuba acinge ngam. ? Imini nobusuku [kwaye ubuye]
Umthandazo wokucinga ngam. Siphila nesidingo sokuziva sithandwa kwaye sinqwenela, oku, ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, kuyinto eqhelekileyo. Uloyiko lokungakhatywa luye lwanda ngakumbi loo mfuno kwaye sisoloko sizifumana sikhangela abanye umthandazo ke ndicinge ngam Imini nobusuku, buya uze kunditsalela umnxeba.
Oku kubonakala njengenyathelo elinomnqweno kakhulu kodwa akukho nto iqhubekayo evela kwinyani.
Imithandazo sisona sixhobo sethu sokomoya sinamandla
Umthandazo uya kuhlala usisisombululo kwaye oku kusebenza kuzo zonke iinkalo zobomi bethu.
Kukho imidalo ekhethekileyo yento yonke kwaye kule meko ethile ikwanjalo kwaye iyasebenza kwaye inamandla kunezinye.
1 Ngaba umthandazo ocinga ngam uza kusebenza?
1.1 Umthandazo kuKufa okungcwele ukuba ucinge ngam
1.2 Umthandazo wokuba ucinge ngam ngoku
1.3 Umthandazo wokundijonga ngokuzithemba
1.4 Umthandazo wokuba ucinge ngam kwaye ubuye
2 Ndingathetha izivakalisi ezi-3?
Ngaba umthandazo ocinga ngam uza kusebenza?
Zonke izivakalisi ezibekiweyo kweli nqaku ziye zavavanywa kwaye zinamakhulu ubungqina bobuchule bokuphumelela.
Zonke zinamandla amakhulu kwaye zinamandla angummangaliso.
Ukuba uthandaza bonke benokholo olukhulu kwaye ukuba uswele, ungaqiniseka ukuba baya kusebenza.
UThixo kunye nabanye abangcwele banceda abo bayidingayo. Ukuba ufuna nje uncedo lukaThixo.
Iya kukwenza ukuba ucinge ngesiqu sakho, ikwenze uthandane, ufune kwaye uphelelwe lithemba, yonke imini, imini nobusuku, ngamaxesha onke.
Ngokuxhomekeke ku (yatsho igama lomntu) kwiimvakalelo zam nakumzimba wam, umzimba, iingcinga kunye nomphefumlo waloo mntu, yiza kum ngobusuku nemini nokuba zithini na iimeko kum.
Ndiyakucela, egameni likaSanta Muerte Lady ndicela undinike amandla kunye nolawulo olupheleleyo, ukuze ndibenalo mntu usecaleni kwam, ndiyakucela ukuba uhlale undikhathalela, kwaye ungaze uyeke ukuzalisekisa zonke ezi zinto zilungileyo ndikucela kuwe.
Kude kube uyifuna, ndiyakucela ukuba undise ebusweni bakho. Ndiyakubiza, ungaze undilahle kwaye ndicela ungandihoyi.
Ukwenza uthando lindicingele yinto ethile enzima.
Yiyo loo nto kufuneka sithandaze komnye umntu onamandla nangamandla amaninzi lothando.
ISanta Muerte liziko elifanelekileyo ukuyenza
Umthandazo wokuba ucinge ngam ngoku
Ndisondela kuwe ukuze ukhulule intliziyo yam kwaye upholise amanxeba am.Wena obekude kwelona liphezulu kwaye ubhengeza uthando el mundo Ndicela undithethelele, ndicela uncedo nenceba yakho Ohogelosi yam enkulu!
Ndincede ndicime ukulamba kwam kothando, ndincede ndenze imvakalelo kunye nokuzibophelela okwenyani. Yenza (litsho igama lowathandayo) asondele kum ngamehlo othando olunyulu.
Mamela izicelo zentliziyo yam kwaye ungandilahli kwi-Archangel yothando, inkosana yezulu.
Nina nifanelwe luthando lOsenyangweni, funa uxolo entliziyweni yam Ndizalise ngolwaneliseko lokonwaba ngalomntu endiye ndathandana naye.Ndiyazi ukuba ukulunga kwakho kuya kuyichukumisa intliziyo yakho uze kum, njengomkhonzi kaThixo ukuba sobabini , uyawenza ummangaliso.
uthando lwakho infinito Ingelosi yam enkulu, ubukhulu bakho buyandizalisa kwaye umbulelo wam uya kuba ngunaphakade.Yichukumise intliziyo yakhe kwaye uya kuyiphilisa kwangoko.
Ngamana ukulunga makube kum nothando lwakho malube nomhlaba, Amen!
Kule meko, siza kubona iziphumo zomthandazo kwangoko nokuba asikwazi ukukuqinisekisa kwaye le yinto enamandla ngalo mthandazo, esimema ukuba sikholelwe ukuba ummangaliso wenziwe nangona singawuboni umphumo uqobo.
Bambi bakholelwa ukuba thandaza okanye ubuze ngeenjongo zokulawula iminqweno okanye iingcinga zabanye abantu isenzo sobugovu kuthi, kodwa abanye bakholelwa ukuba sisenzo sothando nokuba zininzi iimbono zabo.
Umzekelo, kwiimeko apho ikratshi lisebenzisile kwaye livumela umntu ukuba angaphambuki kwengalo yakhe, omnye umthandazo onamandla wokuba isithandwa sam sicinga ngam unokuba luncedo kakhulu, kodwa ayisiyiyo into yokuba sisokola kuwo wonke umntu kwaye emva komthandazo siya kuzama ukwenza i-blur kunye ne-akhawunti entsha.
Injongo kukwakha isidingo sendlela yokwenzeka, hayi ukugoba omnye umntu ukuba athathe isigqibo kwaye enze into endiyifunayo.
Umthandazo wokundijonga ngokuzithemba
“Ndijonge ngoku, ngeli xesha lifanelekileyo (ukhankanya igama lomntu) ndifuna ukuba undijonge, naphi na apho ukhoyo.
Nkosi, ukususela ngalo mzuzu ndiyakucela ukuba (igama lomntu) ubeke iingcinga zakho kum kuphela, ukuba andinakucinga enye into ngaphandle kwam, ukuba igxila lakho linikezelwe kum kuphela.
Ukuba ngale ndlela ndiqonda ukuba uyandidinga ebomini bakho kwaye awufanele uchithe olunye usuku ngaphandle kothando lwam. Yenza lo mzuzu (igama lomntu) ulibale ikratshi lakho, unditsalele umnxeba, undijonge ngokulangazelelo kwaye ufuna ukuba nam ecaleni kwakho yonke imihla yakho.
Ngamandla kaThixo, ndibiza iingelosi zakhe ezintathu. IMIGUEL, RAFAEL, GABRIEL, ukuze babeke izandla (igama lomntu) kwaye bangabi nakho ukufumana owesibini engqondweni.
Ngamana intliziyo yakhe, umzimba, umphefumlo nomoya wakhe ungowam kwaye kuphela kum, ukuba kuphela acinga ngam kwaye andinqwenele, ukuba abajike bonke abanqwenela ukusondela okubi ngabom.
Ngegama likaYesu, amen.
Umthandazo uyasebenza kuzo zonke iimfuno esinokuba nazo njengabantu kwaye siziva sifuna ukuya kwinqanaba lokuphelelwa lithemba, rhoqo, sisidingo esizama ukusanelisa ngamaxesha onke.
Thandaza ucele ukuba omnye umntu, isibini esikhoyo, okanye omnye osandilahlile kutshanje, azive ngathi ujonge kuthi yeyona ndlela isempilweni.
Kucetyiswa ngakumbi sithandaze simjonge loo mntu kwaye sizichaze ekugatyweni kabuhlungu.
Imithandazo ingangaphezulu kwamagama, yonke into iselukholweni apho sithandaza ngayo.
Umthandazo wokuba ucinge ngam kwaye ubuye
Amandla amakhulu kaThixo, ndinibongoza, ndinike umoya wokuphelelwa lithemba, moya wobukumkani, ukungalawuleki.
Ndiyakucela ukuba undincede undilawule (igama lomntu) kunye nokulawula iimvakalelo zabo ezi-5, ukuze ngale ndlela ndingakwazi ukuphuma ezingqondweni zabo ngomzuzwana.
Ndikubongoza, ukuze ube sisikhokelo sam kule ndlela endifuna ukuhamba ngayo, ukuze (igama lomntu) ibe yeyam kuphela, ukuze ushiye kude kubo bonke abanqwenela ukusondela ngeenjongo ezihamba ngaphaya kobuhlobo okanye abo banqwenela msuse kum
Ndiyakubongoza, ukuba ube lilo kuphela icebiso lakho imini nobusuku, ukuze ufune kum kwaye ube ecaleni kwam.
Ngegama lakho, moya omkhulu. Amen.
Ukucela uncedo lokomoya ukufumana ukubuya komntu osishiyileyo kuyinto eqhubayo iminyaka emininzi.
Bambiza la umthandazo wokuphelelwa lithemba kwaye inamandla ngaphezu kokuba ucinga.
Le mithandazo inokwenziwa nangaliphi na ixesha losuku, into ekufuneka uyigcinile yile nto uyifunayo.
Kuba umthandazo kufuneka wenziwe ngombono ocacileyo ukunqanda ukucela into esingayifuni kwaphela.
Ndingathetha izivakalisi ezi-3?
Abantu abaninzi abazi ukuba bangakwazi na ukuthandaza ngaphezu koyedwa umthandazo. Kule meko, sinokuthi ewe.
Thandaza kuyo yonke imithandazo oyifunayo, kodwa yenzani ngeentsuku ezahlukeneyo.
Ungaze uthandaze ngenjongo efanayo ngala mini.
Zama ukushiya indawo yosuku olu-1 phakathi kwesivakalisi ngasinye ukuze ucinge ngam kwaye uphuphe ngam imini yonke nangoku.
Ukholo yeyona nto ibalulekileyo kuyo yonke imithandazo. Ukuba unokholo kwaye uhlala uthandaza ukukholelwa ukuba yonke into izakuhamba ngendlela, yonke imithandazo iyasebenza.